My World: ~ မနက်ခင်းလေးမှာ နိုးတာနဲ့ ~
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, November 13, 2012 Labels: အထွေထွေမှတ်စု
မနက်ခင်းများသည် တစ်နေ့တာတွင် လူအများ၏ အကြိုက်ဆုံးအချိန်ပိုင်း ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် သင်က ညကို နောက်ကျမှအိပ်တတ်သူဆိုပါတော့။ သတိပြုရမည်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားကို ယုတ်လျော့စေသည်ဆိုသည့်အချက်ပင်။ သင့်ရဲ့ မနက်ခင်းကို ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ စတင်လိုက်ပါ။ ကျန်းမာပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ ပြတင်းတံခါးပေါက်မှ အခန်းဆီးလိုက်ကာကို တစ်ဝက်ဖွင့်ပြီး အိပ်ပါ။
ဒီလိုအိပ်ခြင်းဖြင့် တံခါးမှ ဖြတ်ဝင်လာသော နေရောင်ခြည်သည် သင့်ဦးနှောက်အတွင်းရှိ မယ်လနင်ဓာတ်ထုတ်လုပ်မှုကို နှေးကွေးစေပြီး အိပ်ယာမှနိုးထစေသည့် အက်ဒရီနယ်လင်ဓာတ်ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ နှိုးစက်မြည်လျှင်တောင် သင်က အိပ်ပျော်ရာမှနိုးထနှင့်နေပြီးသား ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အထက်ပါနည်းထက် ပိုကောင်းတာက ညခင်းအိပ်ယာစောစောဝင်ခြင်းပင်။ အိပ်ရာစောစောဝင်ခြင်းဖြင့် မနက်ခင်းနေရောင်ဝင်လာပြီး အိပ်ရာနိုးသောအခါ တစ်ညလုံး၀၀လင်လင် အိပ်စက်အနားယူလိုက်ရသည့် အသိကို ရရှိနေပါလိမ့်မည်။ ဒီအကျင့်ကို မွေးထားမယ်ဆိုရင် နှိုးစက်နာရီကို အားကိုးရခြင်းထက် သင့်ရဲ့ဇီဝနာရီရဲ့ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအောက်မှာ နေ့တစ်နေ့ကို စတင်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။
နှိုးစက်ကို ၁၅ မိနစ်စောပြီး ပေးထားပါ။
ဒီလိုပေးထားမယ်ဆိုရင် သင့်အိပ်ယာကနေ ကမန်းကတမ်း ခုန်ပေါက်ထပြေးရတဲ့ ပြသနာနဲ့ မကြုံနိုင်တော့ပါ။ သင့်ရဲ့ မနက်ခင်းကို အိပ်ယာပေါ်မှာပဲ အသာအယာလဲလျောင်းပြီး ဖြည်းဆေးစွာနိုးထခွင့်ရသွားပါလိမ့်မည်။ အညောင်းအညာဆန့်ခြင်း၊ တီဗွီမှသတင်းများနားဆင်ခြင်း၊ ဒီနေ့ အပြင်ကို ဘာအင်္ကျီဝတ်သွားမယ်၊ ဘာတွေလုပ်မယ်၊ မနက်စာကို ဘာနဲ့စားမယ်ကအစ အိပ်ယာပေါ်မှာပဲ စိတ်ကူးရုံနဲ့ ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့်လည်း ကြိုတင်စိတ်ကူးထားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဒီလို စိတ်ကူးနှင့် ပုံဖော်နေရချိန်လေးများမှာ မိမိတစ်ဦးတည်းသာပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးများသာ ဖြစ်ပေတော့သည်။
ခြေလက်နှင့်ခေါင်းတို့ကို ၁၅ စက္ကန့်မျှကြာအောင် အညောင်းဆန့်လိုက်ပါ။
တရေးနိုး မျက်လုံးမဖွင့်ခင်လေးတင် ထိုကဲ့သို့ အညောင်းဆန့်ကြည့်ပါ။ လက်ကို အရင်မလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ လက်ချောင်းတွေက စတင်ပြီး ဆန့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်လက်၊ ပြီး လက်ကောက်ဝတ်၊ ပြီး လက်မောင်း တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ဆန့်ပါ။ ပြီးရင် နောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်ကိုလဲ ထိုနည်း၎င်း လုပ်ပါ။ ထို့နောက် ခြေချောင်း၊ ခြေချင်းဝတ်နှင့် ခြေထောက်တစ်ခုလုံးကို ဆန့်ပါ။ နေက်ဆုံး လည်ပင်းနှင့် နောက်ကျောတို့ကို ဆန့်ခြင်းဖြင့် အိပ်ယာက ထပါ။ သင့်ရဲ့ ကြွက်သားများနှင့် အရိုးအဆစ်များကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရာရောက်သည့်အပြင် သွေးလည်ပတ်မှုကိုလဲ အားပေးရာရောက်သည့်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်ရှုးများဆီ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ် ထပ်လောင်းပိုမိုရရှိစေပါသည်။
မနက်တိုင်း စိတ်ကို ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် ကိုးကားချက်တစ်ခုခုကို ဖတ်ပါ။
၄င်းက တစ်နေ့တာအတွက် လျာထားချက်အဖြစ် အစီအစဉ်ကြမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မနက်ခင်းမှာ အာရုံလွဲစရာ အဆိုးမြင်စရာတွေကို မေ့ထားပြီး လုပ်စရာရှိတာကို တည့်တည့်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်လာနိုင်စေမယ့် အကိုးအကားတစ်ခုခုကို ဖတ်လိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေးမယ့် ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖြစ် ရွတ်ဆိုလိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံးတစ်ပုဒ်ကို အကြံပေးရမယ်ဆိုရင် Rudyard Kipling ရဲ့IF ဆိုသောကဗျာပင်ဖြစ်သည်။
ဗီတာမင်အားဆေးဗူးကို မီးဖိုချောင်ထဲက ကော်ဖီဖျော်စက်ဘေးမှာဖြစ်ဖြစ် သတိတရသောက်မိစေမယ့်နေရာမှာ ထားထားပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ဆေးသုတေသနပြုလုပ်ချက်အရ ရရှိခဲ့သော ညွှန်းဆိုချက်တစ်ခုတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသားတိုင်း ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဗီတာမင်များ သောက်သုံးရမည်ဟု ပါရှိလေသည်။
မနက်ခင်းများတွင် စိတ်မပင်ပန်းစေဖို့ သင့်ရဲ့အတွေးများကို ရွေးချယ်မှုများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် မခိုင်းစေမိပါစေနှင့်။ ရွေးချယ်ရာနတ္တိ ဆုံးဖြတ်ချက်နတ္တိဖြင့် နေ့တစ်နေ့ကို စတင်ပါ။ နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါသည်။ ပထမနည်းလမ်းက ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မနက်ခင်းအစား ညမအိပ်ခင်ကတည်းက ချမှတ်ပါ။ ဘာအင်္ကျီဝတ်မယ်၊ မနက်စာ ဘာနဲ့စားမယ်၊ အလုပ်ကို ဘယ်လမ်းကသွားမယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒုတိယနည်းလမ်းက သင့်ရဲ့မနက်ခင်းအချိန်ဇယားကို အသေဆွဲထားပြီး ထိုဇယားအတိုင်း လိုက်နာပါ။ အမှန်တကယ်အားဖြင့်လည်း သင့်မနက်စာ၊ အချိန်ဇယား၊ ရေချိုးချိန် စသည်တို့မှာ တစ်ရက်နဲ့တစ်ရက် ပြောင်းလဲစရာ အကြောင်းမရှိသည်မဟုတ်ပါလား။
သားသမီး ကလေးငယ်များကို ပိုက်ပွေ့ပါ။
ကလေးငယ်၏ကုတင်ဘေးမှာ ထိုင်ပြီးသူ့ရဲ့ဆံပင်ကို ဖြည်းညင်းစွာပွတ်သပ်ပြီး သူ့ကို နှိုးလိုက်ပါ။ တကယ်လို့ ကလေးက အရမ်းငယ်သေးရင်လည်း သူ့ရဲ့ အနားမှာထိုင် သူ့ကိုပွေ့ချီ ပွတ်သပ်ပြီး အသာအယာနှိုးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအချိန်ခဏလေးက သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာလုံးကို ၀မ်းသာပီတိဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။
မနက်ခင်းတွေမှာ သီချင်းနားထောင်ချိန် ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်ခန့်ထားပါ။
သီချင်းနားထောင်ခြင်းဖြင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားတွေ တိုးမြှင့်ပေးပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းအစီအမံများနှင့် အခြေခံအုတ်မြစ်များကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။
လတ်ဆတ်ကောင်းမွန်တဲ့ ကော်ဖီအမှုန့်ကို အသုံးပြုပါ။ သင်ပုံမှန်သောက်သုံးနေကျထက် နှစ်ဆခန့်ပိုပြီး ကော်ဖီဖျော်စက်ထဲကို ထည့်ပါ။ ကော်ဖီ ဖျော်စက်မှာ အချိန်သတ်မှတ်ပေးထားလို့ရတဲ့ စက်မျိုးဖြစ်ရပါမည်။ မနက်စောစော ဖျော်စက်ကို အချိန်ပေးထားလျှင် ကော်ဖီဖျော်စက်မှ ကော်ဖီအနံ့အသက်သည် သင့်ကို အိပ်ယာပေါ်မှ နိုးထအောင် ဆွဲဆောင်နေပါလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင် ကော်ဖီကို အသောက်သုံးသင့်ဆုံးမှာလည်း မနက်ခင်းအချိန်တွေသာ ဖြစ်သည်။ ကဖိန်းဓာတ်သည် ဗဟိုအာရုံကြောကို နှိုးဆော်သော သတ္တိရှိသည်။ ကြွက်သားများကို ဖျတ်လတ်အားကောင်းစေသည်။ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။ ပျော်ရွှင်စေသည်။ အေးချမ်းစေသည်။ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း တိုးမြှင့်ပေးသည်။ ပြဿနာများကိုလဲ ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစေနိုင်ပါသည်။
မနက်ခင်းသွားတိုက်စဉ် သင်ဧ။်လျှာကို တစ်မိနစ်ခန့် ကြာအောင် တိုက်ပါ။
ခံတွင်းထဲတွင် ညစဉ်ညတိုင်း ဘက်တီးရီးယားပိုးအမျိုးပေါင်း ၃၀၀ ကျော် တည်ရှိနေသည်။ သွားများကိုသာ အလျင်အမြန်တိုက်ချွတ်ခြင်းဖြင့် ၄င်းရောဂါပိုးများကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လျှာကိုပါ အချိန်ပေးပြီး တိုက်ချွတ်ပါ။
အက်စ်ပရင်ဆေးကို ပမာဏအနည်းငယ် သောက်သုံးပါ။
အက်စပရင်က သင်၏ နှလုံးရောဂါကို ပြေလျော့စေပါသည်။ ဆရာဝန်ပေါင်း ၂၂၀၀၀၀၏ ဆေးသုတေသနတစ်ခုတွင် နေ့စဉ် အက်စပရင် ပုံမှန်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါ အန္တရာယ်ဖြစ်နှုန်းတစ်ဝက်နီးနီး လျှော့ချပေးနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဒါကြောင့် သင့်အတွက် ထိုဆေးနှင့် သင့်တော်မတော်ကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးထားသင့်သည်။
ဘ၀ရဲ့ ခံနိုင်ရည်အား မြင့်စေမည့် နည်းလမ်းများ
မိသားစုဝင်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် အပြန်အလှန်ဖေးမကူညီသည့် ဆက်ဆံရေးတစ်ခု တည်ဆောက်ပါ။
လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ ၀င်ရောက်ကျင်လည်ပါ။ လုပ်အားပေးပါ။ သာသနာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပါ။
သင့်ကိုသင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာပါ ဂရုစိုက်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
သင့်ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်များကို လျစ်လျူရှုရှောင်လွှဲခြင်းထက် အာရုံစိုက်ပြီး တည့်တည့်ရင်ဆိုင်ပါ။
အရက်သေစာနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အားပြည့်အောင်၊ ပြေလျော့အောင်၊ အတွေးအခေါ်ဆန်းသစ်အောင် နေထိုင်ပြုမူကျင့်ကြံပါ။
ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေကို လက်ခံပြီး သင်က ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုသာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါ။
သင့်ရဲ့ ကာယဗလ၊ စိတ္တဗလ သို့ ရည်ညွှန်းစိတ်တွေကို မွေးမြူတည်ဆောက်ပါ။
အခွင့်အရေးကောင်းများကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်လောက်မယ့် အသိုက်အ၀န်းတစ်ခုတွင် ကျင်လည်ပါ။
သားကောင်လိုဘ၀မျိုးထက် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူလို အသွင်မျိုး ဆောင်ပါ။
အတွေ့အကြုံနှင့် ယှဉ်ပြီး လူအများကို ကူညီပါ။
လိုအပ်လျှင် ၀ါရင့်သဘာရင့်များထံမှ အကူအညီတောင်းခံပါ။
Rudyard Kipling ရဲ့ IF ကဗျာလေးပါ။
Selket (Selket Waiyan)
နိုးထခြင်းနဲ့အတူ သိသင့်တာလေးတွေနဲ့ အသိပညာပေးလေးတွေ မှတ်သားသွားတယ် ဖြိုးဖြိုးရေ။
Saw K Shan said...
ညဆို 11 တစ်ခါတရံ 12 အိပ်၊မနက်5နဲ.5:30 ထ
ဆက်တိုက်လုပ်။ complain တွေကမနက်ကနေညထိ
နေ.လည်2နာရီလောက်ဆိုဒေါင်းနေပြီ။ တစ်ခါတရံမှ
ကျွန်တော်တို. 25 ယောက် Overtime နဲ.
တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာ။ ဒီ post ဖတ်ပြီးကြွေတယ်ဗျာ